जनताको सपना पुरा गर्दै मन्त्री पण्डित, २५ वर्षदेखीको अलपत्र सडक कालोपत्रे बन्दै
विराटनगर, असार १०–निर्वाचनमा जनतामाझ गरेका प्रतिवद्धता अनुसार संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको पुर्वाधार विकासलाई तिब्रताका साथ अघि बढाएका छन् । उनले संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम मार्फत पूर्वाधार विकासलाई तिब्रताका साथ अघि बढाएका हुन् ।
उनकै पहलमा मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नं. ६ स्थित पुष्पलालचोक–गछिया सडक पनि कालोपत्रे हुने भएको छ । संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको ग्रामिण सडक सञ्जाल अन्तर्गत २३.७ किलोमिटर पुष्पलालचोक–गछिया सडक कालोपत्रे हुने भएको छ । सो कालोपत्रे सडकको असोज १२ गते आइतबार मन्त्री पण्डितले शिलान्यास गर्ने भएका छन् ।
जनप्रतिनिधिहरु, सवै दल तथा कार्यकता, एवम् स्थानीय जनताको बाक्लो उपस्थितीमा सडक शिलान्यान गरिन लागेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रदेश १ का सदस्य सत्यनारायण चौधरीले जानकारी दिए । बुढीगंगा गाउँपालिका–६ कोयलपुरलाई केन्द्र मानेर गरिने सडक शिलान्यास कार्यक्रमलाई भब्य बनाउन सर्वदलीय बैठक समेत सम्पन्न भएको छ ।
सो बैठकले सडकबाट क्षेत्र नं. ६ अन्तर्गत बुढीगंगा गाउँपालिका र शुन्दर हरैँचा नगरपालिकाका स्थानीय आदीवासी, जनजाती, थारु, मधेशीलगायत सवै जनता लाभान्वित हुने भएकाले तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न गराउन सहयोग गर्ने निर्णय गरेको नेता चौधरीले बताए । उनले विगत २५ वर्षदेखी सो निर्वाचन क्षेत्रबाट विजयी सांसदहरुले आवश्वासन मात्र दिँदै आएपनि मन्त्री पण्डितले जनता माझ गरेको बाचा अनुरुप काम गरेको दावी गरे । सो सडक निर्माण भएपछी जनतालाई ठुलो राहत हुनेछ ।
सडक निर्माणले स्थानीय बजार व्यवस्थापन र कृषि उत्पादनले सहज बजार पाउने नेता चौधरीको भनाइ छ । उक्त सडक निर्माणले प्रदेश राजधानी र विराटनगर महानगरपालिकासँग सहज पहुँच स्थापित समेत गर्ने उनले बताए । सो सडक २ वर्ष भित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी ५२ करोड २४ लाख रुपैयाँमा लुम्बिनी सञ्जीवनी जेभिले ठेक्का लिएको छ ।
दशैँ खर्च जुटाउन दाङमा माग्दैछन् राउटे